एमाले | Infomala
प्रमुख समाचार / राजनीति
ओली र नेपाल समूहको प्यानलमा को-को ?
आज शुरू एमालेको नवौं महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै आगामी २५ गते सकिने छ । महाधिवेशनमा देशभरवाट २ हजार ३ सय २५ प्रतिनिधि सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ । महाधिवेशनमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली समूह प्यानल नै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । ओलीको प्यानल- अध्यक्षका प्रत्यासी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा…
Comments Off on ओली र नेपाल समूहको प्यानलमा को-को ?
एमालेको नयाँ रूप प्रवासी नेपाली मञ्च
नेकपा (एमाले)ले आफूसम्बद्ध विदेशमा रहेका प्रवासीहरूको संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मञ्चको नाम परिवर्तन गरेर प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) बनाएको छ। स्थायी कमिटीको निर्णयको आधारमा गत माघ २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी सर्कुलर जारी गर्दै एमालेले उक्त निर्णय गरेको हो।
निर्णयसँगै भारत प्रवासबाहेक संसारभरि फैलिएको संगठनको एउटै नाम हुने भएको छ। यससँगै एमालेले विधि नै नपुर्यारई गठन गरिएको र केही नेताहरूको घुमफिर गर्न जाने माध्यम बनेको पुरानो कमिटीलाई बिदा गरेर विधानसम्मत नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ। अब युरोप समन्वय कमिटीमा प्रत्येक देशबाट अध्यक्षहरू पदेन सदस्य
रहनेछन् भने कमिटीले पठाएका एक–अर्का सदस्य पनि रहनेछन्। सँगै युरोपभरि सांगठनिक गतिविधि तीव्र बन्नुका साथै कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएका छन्। युरोपका ११ वटा देशहरू– पोर्चुगल, स्पेन फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, रसिया, नर्वे र ग्रिसमा अधिवेशन गठन तथा पुनःगठनको क्रम सुरु भएको छ। (more…)
Comments Off on एमालेको नयाँ रूप प्रवासी नेपाली मञ्च
अभि सुवेदीको ‘साहित्य र आमवृत्त’
अन्तरिक्षमा पहिलो पटक ‘पोर्न चलचित्र’ बनाइने
होचा नेपाली खगेन्द्र थापा मगर बिरामी
Archives Select Month July 2021 April 2021 February 2021 January 2021 June 2020 April 2020 March 2020 January 2020 December 2019 August 2019 June 2019 May 2019 March 2019 July 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013